Daaficii hore ee Cameroon Rigobert Song oo Isbitaalka la dhigay Koomana ku jira – Gool FM
(Youndé), 03 Okt 2016 –Daaficii hore ee xulka Qaranka Cameroon, Rigobert Song ayaa xanuun dhinaca Maskaxda ah uu ku soo booday, waxaana isagoo Koomo ku jira la dhigay Isbitaalka magaallada Youdé ee caasimadda Cameroon.
Song oo ahaa Kabtankii hore ee ugu kulan safashada badnaa Cameroon (137 kulan) ayaa dhaqaatiirta caafimaadka isbitaalka uu ku jiro ay sheegeen in loo duulin doono dhinaca Faransiiska, si baaritaanno caafimaad oo mug weyn loogu sameeyo.
Rigobert oo haatan 40 jir ah waxaa kooxihii uu u soo ciyaaray ka mid ahaa; Liverpool, West Ham iyo Galatasaray, waxaana haatan uu tababarenimo kula shaqeynayay xulka Cameroon isagoo horeyna u soo noqday tababaraha xulka Chad.
Ciyaaryahan Samuel Eto’o oo u dhashay Cameroon ayaa xidiggan u rajeeyay caafimaad deg deg ah farriin uu soo dhigay Twitter-ka, halka sidoo kalena laacibiintii hore ee ay isku naadiga ahaayeen ee Jamie Carragher, Stan Collymore iyo Robbie Fowler ay iyagana u rajayeen saaxiibkoodii hore caafimaad.